Maraykanka oo Xayiraadda Ka qaaday Qaxootiga dalal ay Soomaaliya ka mid tahay. – Xeernews24
Maraykanka oo Xayiraadda Ka qaaday Qaxootiga dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
Xoghayaha Amniga Gudaha ee Mareykanka Kirstjen Nielsen ayaa ku dhawaaqday in la qaaday xayiraadii saarneyd dadka qaxootiga ah ee dalalka uu Maraykanku u arkayay inay halis kaga imaan karto.
Inkasta oo waddamada mamnuucista ay saamaysay aanan magacanyadooda la sheegin, haddana kooxaha qaxootiga u ololeeya waxa ay sheegeen in ay kala yihiin dalalka Masar, Iran, Ciraaq, Liibiya, Mali, Kuuriya Waqooyi, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Suudaan, Suuriya, iyo Yemen.
Wakaaladda Wararka ee dalka Faransiiska (AFP) ayaa soo warisay in Xoghayaha Amniga Gudaha ee Mareykanka Kirstjen Nielsen ay ku dhawaaqday in la qaaday xayiraadii saarneyd dadka qaxootiga ee dalalka loo arkayay inay halistooda badan tahay, waxayna intaasi raacisay in qaxootiga ay mari doonaan
baadhitaan adag, ka hor inta aan loo ogolaan inay Mareykanka soo galaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii October ee sanadkii hore mamnuucay inay Mareykanka galaan dadka qaxootiga ee ka socda 11 dal oo dadkoodu u badan yihiin Muslimiin iyo dalka Waqooyiga Kuuriya ,Saddexdii sano ee u dambeysay ayaa dadka qaxootiga ee galay Mareykanka
waxaa la sheegay inay 40% ay ka yimaadeen dalalkan.
Tan iyo markii Mareykanka uu xayiraadda dhanka socdaalka ku soo rogay dalalkaan waxaa yaraaday dadkii qaxootiga ahaa ee dalkaas geli jiray oo ay u badnaayeen Qaxooti fara badan oo horay looga qaadi jiray dalal kala duwan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/01/qoxooti-soomali.png 480 583 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-01-30 11:30:542018-01-30 11:30:54Maraykanka oo Xayiraadda Ka qaaday Qaxootiga dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
Daawo: Dagaal dagaal faraha lagaga gubtay oo ka socda Yemen Seyoum Mesfin oo calaacal ka dhamaaday Qiraynay Fashilka Kooxda TPLF.